Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalo meela kala duwan ka dhacay oo cadawga lagu naafeeyay & CJWXO muuqaalo cusub.
Dagaalo meela kala duwan ka dhacay oo cadawga lagu naafeeyay & CJWXO muuqaalo cusub.
Posted by ONA Admin	/ October 25, 2012
Wararka naga soo gaadhaya Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo lagu qaaday askarta gumaysiga Ethiopia ee jooga Ogaadeeniya dagaaladaasi ayaa waxa ay u dhaceen:
11/10/2012 Qaansa-daad oo katirsan Magaalada Godey dagaal ka dhacay waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 2Askri
14/10/2012 Deegaanada Rigaato iyo Waraabayuudka oo kawada tirsan Aroorso oo udhaxaysa magaalooyinka Dhagaxbuur iyo Qabirbayax dagaalka halkaasi ka dhacay waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 2askari waxaana lagaga dhaawacay 4kale
16/10/2012 Deegaanka lagu magacaabo Lo’bila oo katirsan Magaalada Qabribayax waxaa lagu dilaya hal askari oo kuwa gumaysiga ethiopia ah
16/10/2012 Deegaanka lagu magacaabo Alaabaley oo u dhow magaalada Dhagaxbuur dagaal halkaasi kadhacay waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 2 askari waxaana lagaga dhaawacay 2kale
19/10/2012 Halka lagu magacaabo Maygaago oo katirsan Aware ee gobolka Dhagaxbuur dagaal halkaasi kadhacay waxaa ciidmada mooraalka jabsan ee gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 3askri waxaana lagaga dhaawacay 2kale
20/10/2012 Dagaal kadhacay meesha lagu magacaabo Dudunka oo Qabridahar katirsan waxaa askarta maxaysatada gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 3askri waxaana lagag dhaawcay 5 kale
21/10/2012 Deegaanka Hadiwayne oo katirsan Magaalada Qabridahar dagaal kadhacay wacaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 2askri waxaana lagaga dhaawacay 4kale sidookale waxaa lagaga furta hub iyo saanada milatari
Sidoo kale waxaa iyaguna jira dagaalo kala dhacay 10,19,20 iyo 25 kuwaasi oo ka kala dhacay 1-Magaalada Wardheer ee xaruta gobolka Doollo,2- Tuurtuur oo katirsan Baabili,3- Dacawo-dhacday oo Shaygoos katirsan iyo 4- Farmadow oo katirsan Qoraxay dagaaladaasi oo khasaare lixaadleh loogu gaystay askarta gumaysiga Ethiopia.
Warar kale oon faafaahintiisa ka sugayno Xarunta oo goordhaweyd nagu soo gaadhay habka teleefoonka ayaa sheegaya saaka aroortii dagaal culus ka dhacay dagamada Dusmo meel kagaga beegan xaga bariga una dhow, dagaalkan ayay wararku sheegayaan in lagu jabiyey cadawga oo laba qeybood ahaa hawrinta iyo ciidamada kale ee gumaysiga Itobiya.
Dagaalka kadib Ayay sheegayaan wararku in sidii cadada u aheed cadawga waxay weerareen Reer daganaa masha dagaalku ka dhacay waxaana la xaqiijinayaa in dhimashada dadka shacabka ah uu gaadhayo 5rux oo kala ah 3 caruur ah iyo 2Nin oo isu adeer ahaaaa iyadoo lasheegayo in dhimashadu intaa kabadan tahay. Waxay magacayadooda nala soo gaadhsiiyay;
Asad osman Gaciye
Ina mahamed gaaciye
Dadkan la xasuuqay ayaa ahaa hal qoys, waxayna daganayeen mesha lagu magacaabo Dayrka oo dhinaca bariga ka xiga magalada dusmo.
Wixii ka soo kodha gadaal ayaan ka ogaan doonaa.